अन्तर्राष्ट्रिय Archives - Eranimahal Eranimahal अन्तर्राष्ट्रिय Archives - Eranimahal
विश्वब्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ को औषधी खोज्न विश्वभरिका अनुसन्धानकर्ता दिनरात काम गरेका छन् । ठूल ठूला औषधि उत्पादक कम्पनी र बायोटेक कम्पनी उक्त अनुसन्धानको अग्रपंक्तिमा छन् । विश्वका कतिपय
सन् २०५० सम्म समुद्रमा डुब्नेछन् संसारका यी ठूला सहरहरू
समुद्री सतहमा भएको वृद्धिले सन् २०५० सम्म संसारका प्रमुख तटीय सहरहरू विश्वनक्साबाट आंशिक वा पूर्ण रूपमा मेटिने र अहिलेसम्म अनुमान गरिएभन्दा तीन गुणा बढी मानिस प्रभावित हुने पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको
काठमाडौं- चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण मिति टुंगो लागेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति २५ असोजमा काठमाडौं आउने जानकारी दिएको हो । विज्ञप्तिमा
काठमाडौं । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा भएको सवारी दुर्घटनामा ६ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । एक भारतीय र एक पाकिस्तानी नागरिकको पनि दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ ।
किन राजधानी अन्तै सारे यी देशले ?
बीबीसी । केही समय अगाडि मात्र इन्डोनेशियाले ट्राफिकको चपेटमा दबिँदै गएको जर्काता सहरबाट राजधानी अन्तै सार्ने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि आधिकारिक रुपमा छनौट गरिएको सहर भने सार्वजनिक गरिएको
पानीजहाजबाट चीनको रकेट प्रक्षेपण ! (भिडियो सहित)
चीनले बुधबार समुन्द्रबाट रकेटको सफल प्रक्षेपण गरेको छ। कार्गो जहाजबाट चीनले रकेटको प्रक्षेपण गरेको हो। यससँगै चीन समुन्द्रबाट रकेट अन्तरिक्षमा पठाउने पहिलो देश बनेको छ । समुन्द्रबाट भएको रकेट प्रक्षपण
अमेरिकामा एक बन्दूक धारीको आक्रमणमा ११ जना मारिए
Preview(opens inanew tab) एजेन्सी- मेरिकी राज्य भर्जिनियामा बन्दुधकारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ। एक सरकारी भवनमा गोली चल्दा अन्य ६ जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले
अष्ट्रेलियामा चल्याे चालक बिहीन रेल
सिड्नी । अष्ट्रेलियाकै पहिलो चालकविहीन रेल सेवा आइतबारबाट सुरु भएको छ । करिब ४० मिनेट लामो यात्रा दुरी भएको यो मेट्रो रेलले सिड्नीका १३ वटा स्थानलाई जोड्छ । सिड्नीको च्यास्वुडदेखि
दुबइमा नेपालीहरुको “कोसेली ट्राभल एन्ड टुरिजम” सञ्चालन हुने
रानीमहल काठमाडाैँ, ३० बैशाख । बरदुबईमा नेपालीहरुको “कोसेली ट्राभल एन्ड टुरिजम” खुल्ने तयारीमा । दुबई बरदुबई- वैदेशिक रोजगारीको क्रममा युएई आएका चार जना नेपाली मिलेर दुबईमा कोसेली ट्राभल खोल्ने भएका
परमाणु सम्झौतामा इरानद्वारा पश्चिमी देशलाई चेतावनी, दियो ६० दिनको ‘अल्टिमेटम’
एजेन्सी काठमाडौं २६ बैशाख । इरानले युरोपेली देशलाई ६० दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिँदै अमेरिकाको तर्फबाट लगाएको प्रतिबन्धबाट आफूलाई बचाउनका लागि ठोस् कदम उठाउन भनेको छ । यसका साथै उनले यस्तो नभए
रूसमा जहाजमा आगो: कम्तीमा ४१ जनाको मृत्यु
विविसि । मस्कोमा आपतकालीन अवतरण गरेको एउटा रूसी हवाई जहाजमा आगो लाग्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४१ पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रूसका संघीय अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त जानकारी दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका
लिबियामा जारी हिंसामा ३९२ को मृत्यु
त्रिपोली, वैशाख २१ गते । संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन रहेको लिबिया सरकार र पूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय जनरल हफ्तारका विद्रोही सेनाबीच केही समयदेखि जारी भीषण सङ्घर्षका कारण लिबियामा कम्तीमा तीनसय ९२ जनाको
नेपालकाे भूउपग्रह (स्याटेलाइट) अन्तरिक्षमा आज राति प्रक्षेपण हुने
काठमाडाैँ, ४ बैशाख । अन्तरिक्षमा पुगेको ६ दशकपछि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) अन्तरिक्षमा आज (बुधबार) राति अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिने भएको छ । जापानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको फेलोसिपमा क्युशु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी
जापानी समाजसेजी ओकेबाजीलाई पाल्पामा नागरिक अभिनन्दन
कमल अधिकारी पाल्पा, ३० फागुन । लामो समयदेखि पाल्पाका विभिन्न ग्रामिण भेगमा बसेर समाजसेवा गर्दै आउनुभएका जापानी नागरिक काजुमासा काकीमी ओकेबाजीलाई तानसेनमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ । विगत २५ बर्वादेखी